Shivaraj Online | अबको ‘लकडाउन’को स्वरुप कस्तो ? २५ विज्ञसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री - Shivaraj Online अबको ‘लकडाउन’को स्वरुप कस्तो ? २५ विज्ञसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री - Shivaraj Online
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बन्दाबन्दी (लकडाउन्) तथा यसले पारेको प्रभावबारे छलफल गर्न विज्ञ समूहलाई बोलाउनुभएको छ। छलफलका लागि बुधबार (आज) अपराह्न ४ बजे स्वास्थ्य, अर्थ, सामाजिक क्षेत्रका २५ जना विज्ञहरूलाई प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटार बोलाइएको छ ।
छलफलमा स्वर्णिम वाग्ले, डा. भगवान् कोइराला, डा. लोचन कार्कीलगायतको समूहलाई डाकिएको छ। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनको तयारी गरिरहेको छ । मोडालिटीको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड-१९ उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई दिएको छ।